« Efa tokony ho avotra ihany ny reninay, 73 taona, fa nihodina kely nanavotra ny zafikeliny izy no nahatonga azy nianjeran’ny trano tao an-dalantsara misy ny tohatra », hoy Randriambololona Robert Jacques, faralahy, zanaky ny tompon-trano. Zaza 3 taona ny iray maty, zanaky ny mpanofa trano, tao ambany rihana.
Fianakaviana telo izy ireo no mipetraka tao amin’io trano efa ho 100 taona eo ho eo io. Trano vita biriky tany, mifono biriky tany manga ny ivelany, misy efitra efatra izy io. Trano novidiana tamin’ny taona 1986. Nampanofaina izy teo aloha. Ny taona 2003 vao nifindra nipetraka tao ny tompon-trano. Misy olona valo mianaka ny mpanofa trano tao ambany rihana. Misy enina kosa ny fianakavian’ny tompon-trano, miampy ny fianakaviana iray hafa ahitana olona dimy, izy samy any ambony rihana mizara efatra.
« Vokatry ny ranon’orana mitohy, izay nahatonga ny vodin-trano nilon-drano, sy ny rivotra nanozongozona azy omaly no mety nampirodana ny trano. « Nivava ny trano, io nianjera io tamin’ny farany », hoy Rabezaka Robert, lahimatoa amin’ny tompon-trano.
Niantso ny Mpamonjy voina eny Tsaralalàna ny fianakaviana naka ireo razana tototry ny ranon-tany sy ny biriky nianjera ary nandrava izay nahiana hitera-doza amin’ny manodidina.